Waa maxay iyo sidee buu u shaqeeyaa aragtida heliocentric? Saadaasha Shabakadda
Waa maxay iyo sidee u shaqaysaa aragtida heliocentric?
In meerayaasha nidaamka qorraxda ay ku meeraystaan ​​xiddig dhexe oo la yiraahdo Qorraxda si sax ah looma aqoon. Waxaa jirtay aragti ah in Dhulku uu yahay udub-dhexaadka Caalamka iyo in meerayaasha intiisa kale ay ku dul meeraystaan. Aragtida heliocentric Midka maanta aan ka hadlayno waa midka ay Qorraxdu udub dhexaadka u tahay isla markaana ay tahay xiddig go’an.
Ayaa soo saaray aragtida heliocentric maxaase ku saleysan? Qodobkaan waxaad ku awoodi doontaa inaad si qoto dheer u ogaato aasaaskiisa cilmiyeed. Miyaad jeceshahay inaad si fiican u ogaatid iyada? Kaliya waa inaad sii wadataa aqrinta 🙂
1 Astaamaha aragtida heliocentric
2 Mabaadi'da guud ee aragtida
3 Farqiga u dhexeeya heliocentric iyo aragtida juqraafiyeed
3.1 Sharaxaad ku saabsan habdhaqanka meerayaasha
Astaamaha aragtida heliocentric
Intii lagu jiray qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad waxaa jiray kacaan cilmiyaysan oo doonayay inuu ka jawaabo dhammaan su'aalahaas ku saabsan Caalamka. Waxay ahayd xilli barashada iyo daahfurka moodellada cusub ay ugu badnaayeen. Moodooyinka waxaa loo abuuray inay awoodaan inay sharxaan hawlgalka meeraha iyadoo la tixgelinayo Caalamka oo dhan.
Mahadsanid fiisikiska, xisaabta, bayoolajiga, kimistariga iyo cilmiga xiddigiska taas oo ay u suurtagashay in wax badan laga ogaado Caalamka. Markaan ka hadlayno cilmiga xiddigiska, saynisyahannada taagan waa Nicolaus Copernicus. Wuxuu ahaa abuuraha aragtida heliocentric. Wuxuu ka dhigay iyada oo ku saleysan indha indheyn socota ee dhaqdhaqaaqa meerayaasha. Waxay ku salaysnayd astaamaha qaar aragtida hore ee juqraafi ahaan si loo beeniyo.
Copernicus wuxuu soo saaray moodel sharraxaya shaqooyinka Caalamka. Wuxuu soo jeediyay in dhaqdhaqaaqa meerayaasha iyo xiddiguhu ay raaceen waddo u eg qaab xiddig weyn oo go'an ah. Waxay ku saabsan tahay Sun. Si uu u beeniyo aragtidiisii ​​hore ee juqraafi ahaan, wuxuu adeegsaday dhibaatooyin xagga xisaabta ah wuxuuna aasaas uga dhigay cilmiga xiddigiska casriga ah.
Waa in la sheegaa in Copernicus ma ahayn saynisyahankii ugu horreeyay ee soo jeediya moodeel heliocentric ah kaas oo meerayaashu ku wareegi jireen Qorraxda. Si kastaba ha noqotee, mahadsanid aasaaska sayniska iyo muujinta waxay ahayd aragti sheeko iyo waqti ku habboon leh.
Aragti isku dayaysa inay muujiso isbeddel ku dhaca aragtida cabirka noocan ah ayaa saameysa dadka. Dhinaca kale, waxaa jiray waqtiyo ay cilmi-baarayaashu ka hadlayeen xallinta dhibaatooyinka xisaabeed si aan looga tagin juquraafiyada. Laakiin iyagu ma diidi karaan in tusaalaha ay soo dhiibtay Copernicus uu bixiyay aragti dhammaystiran oo faahfaahsan oo ku saabsan sida loo shaqeeyo Caalamka.
Mabaadi'da guud ee aragtida
Aragtida heliocentric waxay ku saleysan tahay mabaadi'da qaar si ay u sharraxdo dhammaan howlaha. Mabaadiidaasi waa:
Hay'adaha samada kumana meeraystaan ​​hal dhibic.
Bartamaha dhulku waa xarunta dayaxa (wareegga dayaxa ee dhulka ku wareegsan)
Dhammaan qaybaha waxay ku meeraystaan ​​Qorraxda, oo u dhow bartamaha koonkan.
Masaafada udhaxeysa Dhulka iyo Qorraxda waa qeyb lasaarayo masaafada udhaxeysa Dhulka iyo Qorraxda iyo xidigaha, sidaa darteed wax isbarbardhig ah lagama arko xiddigaha.
Xiddigaha ma guurto, dhaqdhaqaaqiisa maalinlaha ah ee muuqda waxaa sababa wareegga maalinlaha ee Dhulka.
Dhulku wuxuu ku wareegaa meere qorraxda ku teedsan, taasoo keenta qorraxda inay sanad walba u soo guurto, dhulkuna wuxuu leeyahay in ka badan hal dhaqdhaqaaq.
Dhaqdhaqaaqa wareegga ah ee Dunida ee ku wareegsan Qorraxda ayaa sababa dib u gurasho muuqata oo ku aaddan dhanka dhaqdhaqaaqa meerayaasha.
Si loo sharaxo isbeddelada muuqaalka Mercury iyo Venus, dhammaan meertooyinka mid kasta waa in la dhigaa. Markuu midkood dhinca ugu fog yahay Cadceedda marka loo eego Dhulka, waxay u muuqataa mid ka yar. Si kastaba ha noqotee, waa la arki karaa iyagoo buuxa. Dhinaca kale, markay isku dhinac yihiin Qorraxda iyo Dhulka, cabirkoodu wuxuu u muuqdaa mid ka sii ballaadhan, qaabkooduna wuxuu noqonayaa dayax-bar.
Aragtidani waxay si fiican u sharraxaysaa dhaqdhaqaaqa dib-u-socodka ee meerayaasha sida Mars iyo Jupiter. Waxaa si buuxda loo muujiyey in cirbixiyeennada Dunida aysan lahayn qaab tixraac go'an. Taas bedelkeeda, Dhulku wuxuu ku jiraa dhaqdhaqaaq joogto ah.
Farqiga u dhexeeya heliocentric iyo aragtida juqraafiyeed
Qaabkan cusubi wuxuu ahaa kacaan dhammaystiran xagga sayniska. Moodelkii hore, midka dhulka loo yaqaan, wuxuu ku salaysnaa xaqiiqda ah in Dhulku uu ahaa udub-dhexaadka Caalamka isla markaana ay ku hareeraysan yihiin Qorraxda iyo dhammaan meerayaasha. Qaabkan waxaa loo yareeyay kaliya laba nooc oo ah fiirsasho guud oo iska cad. Waxa ugu horreeya waa in la arko xiddigaha iyo Qorraxda. Way fududahay in la eego cirka oo la arko sida, maalintii oo dhan, cirka ayey u guuraan. Sidan oo kale, waxay siinaysaa dareenka ah in ay tahay Dhulka la hagaajiyay iyo inta kale ee samada ee dhaqaaqaysa.
Marka labaad, waxaan helnaa aragtida kormeeraha. Kaliya maahan inay umuuqatay in jirka intiisa kale ay cirka dhaqaaqeen, laakiin Dhulka ma dareemayo dhaqaaq. Way dhaqaaqeen oo dhaqaaqeen ayagoon dhaqdhaqaaq dareemayn.
Intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Dunida waxaa loo maleynayay inay fidsan tahay. Si kastaba ha noqotee, moodooyinka Aristotle waxay ku darsadeen xaqiiqda ah in meerahayagu uu ahaa mid wareeg ah. Ma ahayn ilaa imaatinka cirbixiyeenka Claudius Ptolemy in faahfaahinta ku saabsan qaabka meerayaasha iyo Qorraxda loo jaangooyay. Ptolemy wuxuu ku dooday in dhulku ku yaal bartamaha Caalamka oo xiddigaha oo dhami ay masaafo dhex dhexaad ah u jiraan.
Copernicus cabsi uu ka qabay in la xiro kaniisada Katooliga ayaa ka dhigtay inuu ka gaabsado cilmi baaristiisa isla markaana uusan daabicin ilaa iyo inta uu dhimanayo. Waa markii uu dhiman lahaa markuu daabacay sanadkii 1542.
Sharaxaad ku saabsan habdhaqanka meerayaasha
Meera kasta oo nidaamkan ka mid ah oo uu hindisay cirbixiyeenkan waxaa dhaqaajinaya nidaam ka kooban laba qaybood. Mid ka mid ahi waa khaldan yahay kan kalena waa baaskiil. Tan macnaheedu waxa weeye in kuwa kala soocaa ay yihiin goobaabin barta bartankeeda laga saaray dhulka. Tan waxaa loo adeegsaday in lagu sharaxo farqiga u dhexeeya dhererka xilli ciyaareed kasta. Dhanka kale, Baaskiilku wuxuu ku duugan yahay jihada kaladuwanaanta wuxuuna u dhaqmayaa sidii inuu yahay nooc ka mid ah giraangirta ku jirta giraangir kale.
Baaskiilka waxaa loo isticmaalaa in lagu sharraxo dhaqdhaqaaqa dib-u-celinta ee meerayaasha cirka. Tan waxaa loo arki karaa markay gaabinayaan oo gadaal u socdaan si tartiib tartiib ah mar labaad u socdaan.
In kasta oo aragtidan aysan sharrax ka bixin dhammaan dabeecadihii lagu arkay meerayaasha, haddana waxay ahayd daah-fur in illaa maanta ay u adeegtay saynisyahanno badan oo saldhig u ahaa barashada Caalamka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Waa maxay iyo sidee u shaqaysaa aragtida heliocentric?
Waa maxay roob dhoobo sideese loo sameeyaa?
Xagaagii San Miguel